Iholide kwindawo yokuthengisa iwayini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCorinna
Indawo yethu yewayini ikwilali ezolileyo yewayini yaseHorrweiler, ekumantla eRheinhessen embindini wezidiliya. Indawo yethu epholileyo yeyona ndawo ifanelekileyo yokujonga ummandla wethu ngemoto, ibhayisekile okanye ukukhwela intaba.
Indawo yokuhlala inendawo yokuhlala enekhitshi elincinci, igumbi lokulala elahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendlu yangasese.
Igumbi lokuhlala elipholileyo lifakwe isofa, indawo yokutyela kunye nekhitshi elincinci. Ikhitshi inayo yonke into oyifunayo: ifriji, umenzi wekofu, iketile, imicrowave kunye nesitovu esitshisa i-2.
4.89 · Izimvo eziyi-55
Fumanisa indawo entle yokulima iwayini iRheinhessen, kodwa nemimandla yewayini iNahe, Middle Rhine kunye neRheingau azikho kude. Izixeko zaseBingen, i-Bad Kreuznach, i-Ingelheim kunye ne-Mainz inokufikelelwa ngokukhawuleza kwaye kulula ngemoto okanye ngololiwe.
EHorrweiler kukho indawo yokubhaka kunye nevenkile yokutyela, kodwa kunye nendawo yokutyela yeenciniba, iindawo zokuthenga ezongezelelekileyo kunye neeresityu zinokufumaneka kwidolophu eselumelwaneni yaseGensingen nakwindawo engqongileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Corinna
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Horrweiler